Ihe omume | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Ụdị ntụrụndụ
Uwe oyi nwoke na ejiri dikwa na nkpuru obi
Ihe na 15.09.2019 12.11.2019
You chọrọ ka onye ị hụrụ n'anya nwee mmetụta nke nlekọta gị, n'agbanyeghị na ọ nọghị gị? Iji nwee ahụ ahụ gị n'anya? Mgbe ahụ jide n’aka na ijikọ ya uwe oyi. Uwe nwoke na-agba ajị agba nyere onye ọ hụrụ n'anya ...
Egwuregwu 'Munchkin': iwu
Anyị niile maara etu egwuregwu bọọlụ nwere ike isi dị ụtọ. Na Russia, bọọdụ bọọlụ “Monopoly” na-egwu ebe izizi ewu ewu. N’ebe nke abụọ bụ egwuregwu bọọdụ “Munchkin”, nke ji obi ụtọ na-egwu…
Origami sitere na modulu: ifuru. Mee asambodo gi nke mebere gi
Amikọ sitere na modul kpuchie ọtụtụ isiokwu dị iche iche. Site na mpempe akwụkwọ ị nwere ike ịme okooko osisi, anụmanụ, ụgbọala, ụlọ. Nhọrọ buru oke ibu. Amilọ modul nke Ifami bụ mgbakwunye dị ebube maka ime ụlọ ọ bụla. Yabụ ...
Ngwaọrụ DIY Mee N'onwe Gị: atụmatụ, ụdị na eserese
N’ụdị ọgbara ọhụrụ, mgbe ahịa juputara na ngwongwo ndị mepụtara, ngwaahịa ejiri aka na-amalite ịdị nnukwu mkpa. Ngalaba pụrụ iche na ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ebe a na-ere ere na-amalite ịbanye n’obodo ...
Egwuru egwu chess? Iwu Chess
Na nlele mbu, o nwere ike iyi ka imuta egwuru egwu di nfe, ma n ’eziokwu, i kwesiri igbali otutu ma cheta iwu ole na ole. Akụkọ banyere mmalite nke ndị ...
Usoro mmeghe "Shell" na agịga nwere ọnụ: eserese na nkọwa
Ihe na 15.09.2019 05.11.2019
Mkpịsị na-enye amara pụrụ iche na knitwear. Ọ bụ ya mere ndị omenkà na-anwa ịghọta ọtụtụ usoro ọrụ mmeghe ka o kwere mee. Nke a bụ ihe mmeri mmeri maka uwe ọ bụla, n'agbanyeghị oge. N’isiokwu anyị ga-atụle etu o si dabara ...
Etu ị ga-eji aka gị chọọ akpụkpọ ụkwụ. Otu esi achọ mma akpụkpọ ụkwụ maka nwa nwoke na nwa agbọghọ
Mustkwesiri ikwenye na mba, ọbụlagodi akpụkpọ ụkwụ kacha mma ga-ekpo ọkụ ụkwụ obere nwa gị n'oge ntu oyi. Ọ bụ ya, nke ahụ nkịtị. Achọrọ m ka ụkwụ nwa ahụ bụrụ…
Etu esi edozi akwa ajị anụ sitere na ajị anụ ahụ n'onwe gị?
Ihe na 15.09.2019 09.12.2019
Uwe mkpuchi mink bụ akara ala na uwe mgbochi, nke, ikekwe, nwanyị ọ bụla chọrọ inwe. A na-enwe ekele maka ngwaahịa aji ajị anụ ahụ ma bụrụ nke ejiji. Ọ bụrụ na ihe ahụ dị ọnụ, ka ọ dị mkpa ka echekwa ya.
Nweta afọ ọhụrụ n'ụlọ: Snow Queen ejiji
Afọ Ọhụrụ bụ ezumike dị egwu. Ọ dị iche ọ bụghị naanị na ọnọdụ anwansị, ọ bụghị naanị na atụmanya ọ joyụ na atụ anya onyinye, kamakwa na iji ejiji dị ka uwe a na-adịghị ahụkebe, na-eme ka a mara onye nke…
Kachasị mma echiche. Etu esi ele anya nke mere na eserese onwe onye kachasị mma?
Taa, eserese mmadụ jiri aka ya mee na igwefoto ama ama ghọrọ ihe ama ama karịa nka. Ọ bụrụ na ịchọrọ etemeete zuru oke, edozi isi mara mma na ngwa ndị na-adọrọ mmasị maka agbapụ agba dị elu, ị nwere ike ...
Etu ị jiri aka gị were akwa Peppy Long Nchekwa uwe
Ihe na 15.09.2019 11.12.2019
Nwa agbọghọ ahụ na-acha uhie uhie nke na-acha uhie uhie ghọrọ onye ama ama mgbe ọtụtụ akwụkwọ akụkọ site n'aka onye edemede Sweden. Ọ bụghịkwa ihe ijuanya na ọtụtụ ụmụaka na-ahọrọ ihe onyoonyo a maka uwe anaghị ere. Bcha na ịdị mfe ...
Echiche na-adọrọ mmasị maka oge mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ na okike
Ihe na 15.09.2019 26.09.2019
Mgbe ụfọdụ ọ dị ka mgbụsị akwụkwọ bụ oge ị ga-enwe obi ilu ma kpọchie ya n'ụlọ, ejiri akwụkwọ ma ọ bụ tii n'aka. Mana elela anya oge ufodu mmiri ozuzo na ...
Otu esi eji aka gi mee dodecahedron?
Ihe na 15.09.2019 15.08.2019
Dodecahedron bụ onyonyo ụdị atọ dịkarịsịrị iche, nke nwere ụdị ihu 12 yiri, nke ọ bụla na-anọchi anya pentagon oge niile. Iji aka gị kpokọta dodecahedron, ọ dịchaghị mkpa ịnwe ikike pụrụ iche nke 3D ...
Etu ị ga-esi jiri aka gị kee peacock
Akwụkwọ nwere ike ịbụ ngwa kachasị ọnụ nke na-atọ ụtọ mgbe niile iji rụọ ọrụ. Site na ya ị nwere ike isi rụọ ọrụ origami, kaadị, okooko osisi, garlands, nnụnụ, anụmanụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Tụlee otu esi esi rụọ peacock na ...
Etu esi eme nku ka “fefee” na masquerade na ndu?
N’ime klọọkụsị ọgbara ọhụrụ, a na-eme ncheta ọnụ ala na nnọkọ oriri dị iche iche. Ma ekike dị iche iche nke carnival bara uru ọ bụghị naanị maka ha. Ọtụtụ n’ime anyị na-enwe mmasị isonye na foto ịgbapụta, na-eke ihe ọhụrụ, ...
Kedu ihe ị nwere ike iji aka gị mee akwụkwọ n’ụlọ?
Ihe mepụtara mpempe akwụkwọ n'oge ahụ mere ezigbo mgbanwe, n'ihi na o kwere ka ọ hapụ iji mpempe akwụkwọ dị oke ọnụ. Site na nke a, ọnụ ọgụgụ akwụkwọ mụbara, ihe ọmụma bịakwara nweta ọtụtụ ndị. Ugbua…
Nkọwa gbasara otu esi etinye nkịta na zipa
Taa, anyị ga-agwa gị otu esi etinye nkịta na zipa. Ajụjụ a nwere ike ịdị mkpa maka ebumnuche dịgasị iche: nkịta ahụ nwere ike ịgbaji, tufuo ma ọ bụ wụpụ n'ụgbọ okporo ígwè. Ọtụtụ mgbe ngwaahịa nke a yiri ...
Ebee na otu esi ewepu oriọna n'igwe?
Amara oriọna dị n'igwe n'okpuru aha dị iche iche; a na-akpọ ha “Chinese” na “bọọlụ nke agụụ”. Ekwenyere na tupu ịtọhapụ ụlọ obibi na mbara igwe, ị ga-ederịrị nke gị na ya ...
Ọrụ mpempe akwụkwọ ọkụ: eserese na foto. Mụta ka esi eme ụmụaka aka
Akwụkwọ bụ ihe pụrụ iche maka imepụta ihe. Adomụaka na-asọpụrụ ihe ndị dị na ya mma: crumple, dọkatụrụ adọka, na-enwe ụdị ọ bụla n'okpuru mmetụta nke mkpa, gbanwee site na mpempe akwụkwọ dị larịị gaa na ọnụ ọgụgụ nwere atọ n'ihi nsị ...
Anyị na-ikop akpa
N'oge na-adịbeghị anya, ngwaahịa dị iche iche sitere na obi nwere mmetụta na-enwetawanye ewu ewu. Ihe ndi emeputara site na ihe ndi a bu ihe ndi di iche na ndi mara mma mara ha. Site na edemede a, ị ga - amụta ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,817.